Ricotta: नुस्खा खाना पकाउने। कसरी घर मा ricotta बनाउने?
Ricotta! यो इटालियन पनीर, ताजा भेडा वा गाई गरेको दूध देखि गरे, अक्सर पनीर संग भ्रमित छ। साँच्चै, एउटा द्रुत नजर तपाईं थप परिचित आफ्नो समानता हाम्रो लागि एक डेयरी उत्पादन पत्ता लगाउन सक्छ, र उपस्थिति र बनावट दुवै। तथापि, कम्तिमा एक पटक स्वाद ricotta, तपाईं आफ्नो स्वाद को विशिष्टताको के हो बुझ्न र यसको मूल्य कदर हुनेछ। यो ताजा पनीर भइरहेको नरम र चिल्लो बनावट र एक सानो deflating, तर धेरै कोमल स्वाद रूपमा वर्गीकृत छ। तर, यो हदसम्म ricotta को किसिमहरु मा निर्भर गर्दछ। सबैभन्दा पिज्जा र पास्ता लागि विभिन्न मिठाईहरू, सलाद, साथै toppings को तयारी को लागि प्रयोग आफ्नो तरिका को लोकप्रिय। पनीर गर्छ रूपमा, तिनीहरूलाई भाँडा अधिकांश इटालियन मूलका छन्। र यो देश राम्रो खाना धेरै थाह! अर्को, हामी यसको तयारी र प्रयोग अवस्थामा लागि ricotta नुस्खा के विशेषताहरु नियालेर लिन।
Ricotta र घरेलु पनिर: फरक के छ?
शब्द "Ricotta" (ital। Ricotta) "जरूरत देखि ज्यादा पका" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ। निर्माण को मिति देखि पहिले नै सामान्य घरेलु पनिर बाट यसको आवश्यक फरक गर्न लगाया जान सक्छ। उत्तरार्द्ध थपिएको छ जो दूध हीटिंग द्वारा प्राप्त छ , rennet जसद्वारा यो coagulates र छेना precipitates। यो पकाउने प्रक्रिया मा समाप्त हुन्छ। तर, पनीर प्राप्त गर्न, केक पुन: गरम र इन्जाइम संग जोडिएको थियो। परिणामस्वरूप माथिल्लो तह र ricotta भनिन्छ गरिनेछ।
यो पकाउने प्रक्रिया विशेष चीज विविधता निर्भर उल्लेख गर्नुपर्छ। घर ricotta तयार विधि माथि वर्णन र स्थिरता र स्वाद मा एक धेरै नरम रूपमा प्राप्त छ। यो Ricotta fresca। यो धेरै इटालियन मिठाईहरू, सलाद र अन्य व्यञ्जन लागि हल्का fillings को आधार छ कि। तर, यसको प्रजाति को अरूलाई हो, उदाहरणका लागि, Ricotta salata, एक नूनिलो स्वाद छ र grated parmesan व्यञ्जनहरु को एक नम्बर मा बदलिएको छ। वा Ricotta affumicata - परिपक्व पनीर, जो स्वयं खाजा र grated फारममा घटक रूपमा प्रयोग त हुन सक्छ धूम्रपान। साथै धेरै अरूलाई रूपमा। तिनीहरूले आफ्नै राम्रो सबै छन्, तर हामी पनीर, "ricotta" को क्लासिक संस्करण रुचि राख्नुहुन्छ। यसको तयारी को नुस्खा यस लेखमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ।
घरमा खाना पकाउने: आवश्यक छन् के सामाग्री?
पनीर को उच्च लागत स्थानीय स्टोर मा उल्लेख भए तापनि उत्पादन मूल्य र व्यावसायिक उपलब्धता दुवै उपलब्ध भन्दा बढी यसको तयारी लागि। प्रमुख घटक सानो, र तिनीहरूलाई बीच मुख्य - दूध। प्रयोग सम्भव झिकिएको र सारा दुवै छ। समाप्त उत्पादन को स्वाद मलाईदार र धेरै कोमल बाहिर बारी रूपमा उत्तरार्द्ध, बेहतर (तपाईं देहाती प्राप्त गर्न सक्छन् भने अझ राम्रो) छ। के थप सामाग्री आवश्यक चीज "ricotta"? दूध आवश्यक थियो चार लिटर लागि नुस्खा:
ठीक नुन - चम्मच;
चीनी - दुई ठूलो pinches;
ताजा निचोडा कागति को रस - आधा कप (सेतो सिरका बदलिएको गर्न सकिँदैन, तर आवश्यक छैन)।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, एउटा वास्तविक ricotta छांछ तयार छ। तसर्थ, पहिलो चरणको फलस्वरूप हामी तपाईंलाई पक्कै एक प्रयोग पाउनुहुनेछ जो क्रीम को फारम, एक "पक्ष" उत्पादन प्राप्त। र पहिले नै दोस्रो चरण अनुसूचित भोजन तयार हुनेछ। अक्सर घरमा पनीर "ricotta" को curd बस छैन। सबैभन्दा Housewives प्रारम्भिक परिणाम रोक्न र इटालियन पनीर भनिन्छ छर्रे हीटिंग द्वारा गठन। तर हामी सजिलो तरिका देख छैन, र हामी नियम अनुसार सबै गर्नेछ छन्।
पहिलो चरण: प्राप्त सीरम
दूध धेरै कम गर्मी मा लगभग 90 डिग्री एउटा बाक्लो तल एक पैन मा खन्याइन् र गरम थियो। त्यसपछि कागति को रस आधा र नुन, र चिनी थप्नुहोस्। ध्यान दिएर हलचल। सेकेन्ड को एक जोडी पछि, तपाईं दूध बन्द गरिएको छ र यसको सतह मा गुच्छे गठन गरिएका फेला पर्छ। त्यसपछि, गर्मी देखि पैन हटाउन gauze संग कवर र शांत सामग्री दिन्छ। त्यसपछि फिल्टर र सीरम पूर्ण भोकमरी सम्म पनीर केक प्रतीक्षा थियो। परिणामस्वरूप curd फ्रिज मा साफ छ - यो कुनै पनि पाक लागि प्रयोग वा फल र जामुन खान सकिन्छ।
दोस्रो चरण: ricotta को तयारी
सुरुमा 38-40 डिग्री सम्म - chilled छांछ फेरि गरम छ। एकै समयमा यो हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यसपछि गर्मी हटाउन र एक घण्टा को लागि रक्सी खींचना दिनुहोस्। फेरि हामी स्टोभ मा राख्नु र एक डिग्री तरल जोश छैन भनेर, ट्रयाक, छ 90-93 को एक तापमान गर्न ल्याउन। जगाएर, को कागति को रस को दोस्रो आधा खन्याउन।5मिनेट को लागि कम गर्मी मा मिश्रण गर्मी जारी राख्न र त्यसपछि हटाउन र शांत दिनुभयो। माथि घण्टा 10 - कि पछि तपाईं एकदम लामो समय को लागि फ्रिज मा पैन हटाउन आवश्यक छ। तपाईं साँझ यो भने, बिहान, तपाईं पहिले नै यो प्राप्त र एक colander र cheesecloth को ट्रिपल तह प्रयोग सकिन गर्न सक्नुहुन्छ। केही घण्टा पूर्ण पम्पिंग लागि छोड्नुहोस्। त्यसैले घर ricotta तयार। सीरम प्राप्त गर्न, र उनको पनीर देखि खाना पकाउन - तपाईं डबल कर्तव्य के गर्न छ किनभने यो नुस्खा, अलिकति थप जटिल छ। तथापि, तपाईं तयार बनाएको आधार ग्रामीण उत्पादनहरु व्यापारीहरु देखि, खरीद उदाहरणका लागि बजार मा आफ्नो कार्य सरल गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर, घर खट्टा क्रीम, दूध, खट्टे दूध र अन्य कुराहरू साथै, तिनीहरूले ग्राहकहरु सीरम, पनीर को निर्माण देखि परिणामस्वरूप शेष प्रस्ताव। यहाँ हामी अब को लागि आवश्यक कुरा हो!
पकाउने मामला प्रयोगमा Ricotta
परिणामस्वरूप पनीर podsolite बिट, बनावट बृद्धि गर्न फ्रिज मा एक कन्टेनर र स्टोर मा बदलाव। अब तपाईं लगभग वास्तविक ricotta पनीर छ। प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर व्यञ्जनहरु धेरै र वैविध्यपूर्ण छन्। यो मुख्यतया छ इटालियन मिठाईहरू। नियम, तिनीहरूले अन्य संग मिश्रित ricotta क्रीम पनीरों वा भारी क्रीम र मलाईदार हावा सम्म हरायो। यस्तो रूपरेखा आदर्श जामुन, उज्यालो स्पन्जले केक वा फल puree को एक किसिम संग संयुक्त छ। साथै, ricotta पनीर को कटा टुक्रा ताजा तरकारी सलाद पास्ता सस मा (, नुन feta स्थानापन्न उदाहरणका लागि) थपियो हुन सक्छ (तर, च्याउ र अल।), वा टमाटर र ताजा हरिया संग पातलो इटालियन संयोजन मा पिज्जा लागि भर्नको रूपमा प्रयोग ।
एक लाभ तयार!
केही व्यञ्जन को तयारी तपाईं एक ricotta व्यञ्जनहरु आवश्यक भने, तपाईं यसलाई आफ्नै बनाएर, सजिलै लागू गर्न सक्नुहुन्छ। एकै समयमा जितको रहन - महंगा उत्पादनहरु स्टोर पैसा बचत, एक बिल्कुल प्राकृतिक र ताजा घर पनीर प्राप्त गर्न र वाहेक - घरेलु पनिर, उत्पादन को पहिलो चरणमा उत्पादन जो। को पाक क्षेत्रमा सफलता!
जाम कसरी बनाउने। सुझाव र चाल
दूध संग स्वादिष्ट प्यानकेकहरू कसरी खाना पकाउनु
स्वादिष्ट र सुन्दर बैगुन को "डुङ्गा"
सूप कसरी खाना पकाउनु?
रोचक विचार र सिफारिसहरू: पत्रुस देखि एक उपहार रूपमा के ल्याउन
यो किर्नाले मानिसहरूलाई र जनावर लागि खतरनाक हो?
छुट्टी होटल - यो अतिथि घरहरू एउटा ठूलो वैकल्पिक छ
हवाइ पिज्जा: एक नुस्खा र fillings को भेरिएसनहरूमा
पाइ र स्ट्रबेरी संग पकौडी
Rosselkhozbank संग एक कार ऋण कसरी लिन
कसरी प्लाईवुड बाहिर आफ्नो हातमा कलहंस को प्रोफाइल बनाउने?
Bodyflex समीक्षा मात्रा बोल्न।
निगालो कोरियाली - कम क्यालोरी